ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leNqabana yebhola yeBhola eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'Mr Versatile'. Ibali lethu leTom Thomas Lemar Ubuntwana kunye ne-Untold Ubungqina benkcazelo ye-biography kuletha i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye. Ngoku kungenjalo, uTomas Lemar ungomnye wezakhiwo ezifudumele kwi window ye-2017 yokudlulisa ihlobo. Ngoku, vumela Qala.
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts: Obomi bakwangoko
UTomas Lemar wazalwa ngomhla we-12th kaNovemba ka-1995 kwisiqithi saseCarribean Baie-Mahault, eGuadeloupe, yintsimi yaseFransi. I-Guadeloupe yiSiqithi esaziwayo ngokuzisa iitalente zebhola zamnyama kwiFransi. Amagama ahloniphekileyo afana nawo Thierry Henry kwaye Alexandre Lacazette bonke banelifa labo kwiSiqithi. Abazali babo bonke baye bafudukela eFransi bashiya isiqithi esifana nesibhakabhaka seFrench West Indies.
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Ulwalamano lobomi
Ngexesha lokubhala, uTomas Lemar ubonakalise ukuba ubuhlobo bakhe bubuNye. Oku kuthetha ukuba akukho buhlobo obuqinisekisiweyo okanye ama-Ex-girlfriends okanye abafazi bokuqala. Akanayo nabantwana nayo.
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Umdlalo we Play
I-Lemar ngumdlali ochanekileyo onokukwazi ukudlala ngamaphiko kunye nakwiziko kunye nendima yamahhala. Uhlala ehamba ngeenyawo, kodwa naye ufanelekile unyawo lwakhe lokunene. Uyaziwayo ngenxa yezakhono zakhe zokubhukuda, ukukwazi ngamandla okudlula kunye nokukhawuleka kwamahhala. Uthe uthetha ukudibanisa kunye nabalingani beqela, kunokuba athathe abakhuseli: "Ndizama ukugwema ama-duels kwaye ndigxilise ekudlukeni nasekuhambeni kangangoko kunokwenzeka."Uya kudla ukuzama ukubhala amanqaku ukusuka kwixesha elide kwaye ufumene iinjongo ze-14 kwiimpawu ze-55 kwixesha le-2016-17 kwaye i-17 incedisa.
Udlala nekhanda lakhe kunye nelinyawo lakhe elisekhohlo likwazi ukwenza umlingo-akaze afune ukubakhokisa izinto kwaye nangona ekwazi ukubetha abadlali ngokuqhuba, unalo uluhlu olugqithiseleyo lwezithuba ezizisebenzisayo kwiinkcaso zenkcaso.
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Umsebenzi kwiSishwankathelo
Imveliso yenkqubo ye-Caen yolutsha, uLamar wenza iqela lakhe eliphambili kumdlalo wokuvula wexesha le-2013 / 14 ngo-Agasti 2013.
Wenza ukubonakala kwe-31 ngokupheleleyo kwi-SMC, ngaphambi kokuba akhangele umdla ovela kwiYurophu - wayexhomekeke kwiindlebe ze-Chelsea kwaye wayexhumene neLiverpool, eLyon naseBordeaux naye, kodwa wakhetha ukufuduka eMonaco nge-£ 3.4 million kwi2015.
Umelele iFransi kuzo zonke iinqununu ukusuka ku-U17 ukuya kwi-U21 kwaye wenza i-2016 yakhe yamazwe ngamazwe aphezulu Ivory Coast.
Ukususela ekuhambeni ukusuka eCaen, i-21-iminyaka ubudala sele idlala kwiindawo ezihlukahlukeneyo.
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:I-Ligue 1 Trophy
Mhlawumbi, uKylian Mbappé, uTiemoué Bakayoko noBernardo Silva banokufumana indumiso enkulu kubabukeli. Kodwa indima yeLamar eMonaco ekuphumeleleni iLigue 1 kwaye ifikelele kwiiMidlalo zeMigangatho yeeMigangatho yezemidlalo ayinakuncitshiswa.
Ukhokele iqela lakhe ekuphumeleleni iqela leFransi lonyaka odlulileyo (2017 / 2017) kwaye yafikelela kwi-Champions League i-semi-finals, igxotha izinto ezithandwa nguManchester City naseBorussia Dortmund endleleni.
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:I-1 Ubuthathaka, Amandla amaninzi
Nangona edlala kwiphiko, akayibusiswa ngokuhamba njengabalingani beqela lakhe uBenjamin Mendy noMbappé, kodwa akayidingi. I-Lemar inqwenela ukudibanisa kwaye idlale iipasiphi ezimbini kunye nokusebenzisa ukunyakaza kunye nosongelo lokuthumela kwakhe ukuvula indawo.
Akukho mntu waseMonaco odlalele iipaki eziphambili ngomdlalo kwixesha le-2016 / 2017 (2.2) kuneLamar, kwaye wenza neminqamlezo eninzi (1.4) kunanoma yiphi na iqabane lakhe. Kwaye kwalabo badlala rhoqo kwi-Ligue 1, kuphela okukhethwa nguRadamel Falcao (2.8), iValere Germain (1.8) kunye ne-Mbappe (1.8) enezibheno ezingaphezulu kwiinjongo nganye ngomdlalo kuneLamar ye-1.7.
Khumbula, ngu-21 oneminyaka-ubudala ubudala oye wancedisa ukunqothula iTottenham kwi-Champions League kunye nesiteleka.
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:UYise, Isibongo sokuThunywa koMoya
Ngoku ka GFFNUbaba kaLemar ufuna ukuba ahlale eMonaco aze atyikitye isandiso sokwenza isivumelwano ukuze i-21 ubudala inethuba elihle lokufumana iqela leSizwe leFransi kwiNdebe yeHlabathi kwi-2018.
I-rumor iye yajikeleza nge-2017 iwindi yokudlulisa ihlobo. Yacetyisa ukuba uEdwige wayefuna ukuba unyana wakhe 'angalibali' iArsenal. Njengokuba ngexesha lokubhala, u-Arsenal uye wabuyela eMonaco ngeBhidi ye-£ 40m ye-winger emva kwezinye izibonelelo ze-£ 31m kwaye ngokucacileyo i-£ 35m yachithwa kwakhona. Nangona kunjalo, kuthiwa bazimisele ukuya kwi £ 50m.
Umbuzo; Ngaba u-Arsene Wenger wayeza kukhwehlela i-£ 50m - ngaphezu kweMesut Ozil - kuba ngumdlali owayezimisele ukuhlala ebhentshini ixesha elininzi lexesha?
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Kutheni iLiverpool Khetha iSalah endaweni yeLimar
Ewe, bayathanda Salah, kodwa baqaphele ukuba unomsebenzi wakhe omhle ekuhlaselweni kwamanxeba kuphela xa unendawo, ngenxa yezinga lakhe. Akanakho ukuthinteka okunokuthenjwa njengoLamar. Bacinga ukuba ilungu liya kuba luncedo ngakumbi ekudilizeni amabhasi.
Isizathu esiyinhloko abazange bahambe kuso kukuba wayebiza kakhulu. Babecinga ukuba uMonaco akaze athengise ngaye ngexabiso elincinci. Kwakudingeka baziduduze ngokugqiba i-Lemar mhlawumbi ibhetele kwibhola kunokuba ekhulile. Bakholelwa ukuba banelisekile kaLallana, Coutinho, UGini noFirmino nabo banamdla ebhola.
Into ababeyifuna kwakungomnye umdlali onokuyiphumelela ibhola kunye nasemva kokukhusela. Salah wayeyindoda. I-Lemar, kubo i-AM engcono kunokuba yi-LW.
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Ezinye izinto zokwazi
Umzekelo weLimar uhlala uAndres Iniesta, kwaye ibonisa. Nangona izakhono zakhe zokuqhaqhayisa zininzi, akaxhaswanga ngokuthatha abakhuseli, kodwa kunoko ugxininisa kumdlalo weqela.